के तपाई मोबाइललाई सिरानी छेउ राखेर सुत्नु हुन्छ ? आजै छोड्दिनुस् यस्तो बानी, हुनसक्छ क्यान्सर ! - नेपाल कुरा
के तपाई मोबाइललाई सिरानी छेउ राखेर सुत्नु हुन्छ ? आजै छोड्दिनुस् यस्तो बानी, हुनसक्छ क्यान्सर !
प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार June 9, 2021 , संवाददाता:
काठमाडौं । मोबाइल बोक्नु कुनै रमाइलो होइन तर मोबाइल नहुने हो भने केही समय पनि कटाउन गाह्रो हुन्छ । बेलुकी विस्तारामा होस् या बिहान उठ्ने वित्तिकै हामी मोबाइल चलाउन थालिहाल्छौँ ।
तर, बेलायतको एक्जिटरलगायतका केही विश्वविद्यालयमा गरेको अध्ययनले सिरानी छेउ मोबाइल राखेर सुत्दा निकै धेरै समस्या आउन सक्ने पत्ता लगाएको छ । अध्ययनअनुसार मोबाइललाई सिरानी छेउ राख्दा क्यान्सरमात्र होइन, नपुंसकता पनि हुनसक्छ ।
त्यस्तै, बेलायती विश्वविद्यालयहरुले गरेको एउटा अध्ययनले मोबाइल फोनबाट निस्कने विकिरणको नपुंसकतासँग सम्बन्ध हुने पत्ता लगाएको थियो । मोबाइल फोनको अत्याधिक प्रयोगले पुरुषमा शुक्राणुको उत्पादन घटाउनुका शुक्राणुको गति पनि सुस्त बनाउने त्यो अध्ययनको निष्कर्ष थियो । इजरायलको विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले त सुत्नुभन्दा आधा घन्टा अगाडि नै मोबाइल फोनको प्रयोग रोक्नु पर्ने बताएको छ । एजेन्सी
सानोतिनो झगडाले दाम्पत्य जीवनमा झन् मिठास ल्याउने : अध्ययन
नियमित व्यायाम वा खेलकूद गर्नुहाेस्, शरीरको शक्ति र कार्यक्षमतालाई बढाउनुहाेस्
कम्प्युटरमा धेरै बेर बसेर काम गर्दा आँखा दुख्छ ? यो तरिका अपनाउनुहोस् !